Sii wadista Bilowga Dugsiga Dhexe | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Sanadaha dugsiga dhexe waa xilli sahamin iyo koriin weyn oo xagga tacliinta, bulshada, shucuurta, iyo jireed ah. Minnetonka, macallimiinteena dugsiga dhexe waxay khabiir ku yihiin fahamka iyo dhiirigelinta, waxaanna u qaabeynay qaabkeenna Barashada Luqadda inay si gaar ah u daboosho baahiyaha ardayda dugsiga dhexe. Intii aan sii wadnay bartilmaameedka horumarinta luuqada, dugsiyadeena dhexe waxay sidoo kale ardayda siiyaan fursado ay ku balaariyaan saaxiibtinimada, helitaanka fasalo heer sharaf ah oo lagu barto Ingiriisiga (xisaabta, sayniska, Farshaxanka Luuqada Ingiriisiga), kaqeyb qaadashada barnaamijkeena muusiga iyo barnaamijyada farshaxanka wanaagsan, iyo wax kubarashada mashruuca ku saleysan, waayo-aragnimo gacmeed. Dhammaan qaybaha ayaa lagama maarmaan u ah hore-nimada dhalinyarada iyo horumarka shucuurta
Habka jadwalka jilicsan
Gelitaanka meelaha manhajka
Qodobbada la tixgelinayo
Dugsiga Dhexe: doorashada, qalafsanaanta, dabacsanaanta iyo taageerada
Barnaamijkeena Imtixaanka Luqadda ee Dugsiga Dhexe wuxuu adeegsadaa qaab jadwal jilicsan oo kordhiya guud ahaan waaya aragnimada dugsiga dhexe isla markaana kordhiya barashada luqadda.
Faa'iidooyinka moodeelka jajabka-jadwalka waxaa ka mid ah sii wadida horumarinta luqadda iyadoo diiradda la saarayo qoraalka, akhriska, hadalka iyo dhageysiga; helitaanka buuxa ee xulashooyinka kale ee koorsada ah (oo ay kujiraan koorsooyinka sharfida, barnaamijyada taageerada iyo dhammaan doorashooyinka), iyo jadwal guud oo laxiriira ardayda Ingiriisiga.
Fasalka 6aad, ardaydu waxay isqoristaan Barashada Cilmiga Bulshada oo lagu lammaaneeyo Farshaxanka Luuqadda Qarsoon ee sanadka oo dhan. Iyada oo lagu jaangooyo heerarka gobolka, cilmiga bulshada ayaa ballaarinaya fahamka ardayda ee taariikhda iyagoo sahaminaya juqraafiga iyo horumarka taariikhiga ah ee dadka, meelaha iyo qaababka nolosha ee laga soo qaatay isugeynta ilbaxnimooyinkii hore iyo taariikhda Minnesota. Farshaxanka Luuqadda Dhexdiisa ayaa wanaajinaya akhriska, qorista, ku hadalka iyo dhagaysiga xirfadaha luqadda la bartilmaameedsanayo.
Fasalka toddobaad, Barashada Cilmiga Bulshada ayaa mar labaad lagu lamaaniyaa Farshaxanka Luqadda ee sannadka oo dhan. Ardaydu waxay dooran karaan inay qaataan koorsada Dhaqanka iyo Farshaxanka Isbaanishka ama Shiinaha, ama bilaabaan luqad cusub oo adduunka ah.
Ardayda fasalka sideedaad waxay leeyihiin xulashooyinka soo socda:
Kordhi barashada Quusitaanka adoo ku sii wadaya barashada Cilmiga Bulshada iyo Bilowga
Baro Luqadda adduunka adoo xoogga saaraya suugaanta.
Isqor labada ama Barashada Cilmiga Bulshada ama koorsada Luqadda Adduunka oo keliya.
Ka bilow heerka koowaad ee luqadda adduunka cusub.
Ardaydu waxay dooran karaan mid ka mid ah saddexda waddo ee ku saleysan kartida luqaddooda, ballanqaadkooda iyo yoolalka shaqsiyadeed:
Waddo horumarsan : Jidkan waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay ka faa'iideystaan waxbarashadooda Luqadda, iyagoo gaaraya heerka ugu sarreeya ee ugu fiican ee ay bixiyaan Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka. Ardayda xiiseyneysa inay qaataan koorsooyinka AP iyo IB iyo inay raacaan IB Bilingual Diploma ee dugsiga sare waa inay tixgeliyaan wadadan.
Dhex-dhexaad / horumarsan : Wadadani waxay diiradda saaraysaa Farshaxanka Luuqadda Qarsoon. Fasalka toddobaad, ardaydu waxay qaadan karaan ikhtiyaar, hal rubuc Dhaqanka & Farshaxanka oo la doorto. Daraasadda Bulsho ee Fasalka Sideedaad looma baahna. Ardaydu wali way sii wadan karaan koorsooyinka AP / IB iyo Dibloomada Labada-luqadood ee IB ee dugsiga sare.
Dariiqa Dhexe : Jidkan waxaa loogu talagalay ardayda doonaya inay sii wataan waxbarashadooda Luqadda Dhexdeeda oo ay qaataan koorsooyinka AP / IB xilli dambe oo dugsiga sare ah.
Qoys ahaan, waxaa muhiim ah inaad tixgeliso yoolalkaaga quusitaanka, oo aad horay uga sii fekerto fursadaha iyo faa'iidooyinka suurtagalka ah ee si fiican ugu biiraya luqad labaad:
Awood u leh inuu ku shaqeeyo jawi xirfad leh oo ku saabsan luuqadda bartilmaameedka
Fursadaha Xirfadaha Caalamiga ah
Fursadaha xirfadeed ee la xiriira luqadda
Kordhi fursadaha amaahda kulliyadda
Xirfadaha luqadeed ee shaqeynaya ee loogu safro dibadda
Labba af leh
Maalinteena iskuulka ee Minnetonka waxay ka kooban tahay lix 55 daqiiqadood. Waxaan haynaa jadwal maalinta A / B ah, oo macnaheedu yahay koorsooyinka muusikada iyo jimicsiga jirka ayaa la qaataa maalmaha ka soo horjeedka. Fasallada badankood waxaa dhigta ku dhowaad 28 arday.
Ardayda fasallada 6aad iyo 7aad waxay ka mid yihiin koox. Ardayda fasalka 8-aad kuma jiraan koox koox waxayna raacaan jadwalka fasalka iyaga oo u diyaarinaya qaab dhismeedka dugsiga sare.
Sanadihii 2015 - 16, ardaydu waxay u safreen Spain kadib markay dhameysteen barnaamijka dugsiga hoose ee Spanish-ka.
2014-15, ardaydu waxay u safreen Shiinaha markay dhammeeyeen barnaamijka dhexgalka Shiinaha ee dugsiga dhexe.